The Ab Presents Nepal » यी हुन् सरकारी गाडी लिएर ८ जना युवती सहित फिल्म हेर्न जाने अदालतका अध्यक्ष !
यी हुन् सरकारी गाडी लिएर ८ जना युवती सहित फिल्म हेर्न जाने अदालतका अध्यक्ष !
काठमाडौं-: बुधबार साँझ सवा ६ बजे सरकारी नम्बरप्लेटको एउटा स्करपियो गाडी कुमारी सिनेमा घरभित्र प्रवेश गर्यो ।
बा २ झ १३७१ नम्बरको सरकारी जिप कुमारी हलको पार्किङमा प्रवेश गरेलगत्तै त्यस जिपबाट करिब १० जना यात्रुहरु ओर्लिए । जीपबाट ८ जना युवती तथा महिला र २ जना पुरुष ओर्लिए । अनि सरासर उनीहरु फिल्म हलतर्फ प्रवेश गरे । तर उनीहरु सरकारी कर्मचारी जस्ता भने देखिएनन् ।’
उनीहरु ओर्लिएलगत्तै यस गाडीका चालकले गाडी फर्काए र फर्किन लागे । त्यहीबेला हामीले सोध्यौँ ‘यो कसको गाडी हो ? जवाफमा चालकले ‘किन चाहियो’ भन्दै तर्किए । पछि मिडिया भएको थाहा पाएपछि उनले यो गाडी काशीराज दाहालको भएको बताए ।’
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष हुन् काशीराज दाहाल । सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएकोबारे बिहीबार दाहालसँग प्रतिक्रिया लिँदा सुरुमा उनले त्यो गाडीबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । आफू चढ्ने गरेको गाडी ८०८५ नम्बरको भएको भन्दै उनले फोन काटे’ ।
त्यसको १० मिनेटमा फेरि दाहाल आफैले फोन गरेर बुधबार आफ्नो गाडी बिग्रिएकाले बा २ झ १३७१ नम्बरको गाडी प्रयोग गरेको स्वीकारे । आफू गौशालामा बस्ने गरेको र आफूलाई छाडेर फर्कँदा छोरा, छोरीहरु उक्त गाडीमै बसेर ज्ञानेश्वर गएको उनको भनाई छ ‘।
तर जीपमा १० जना व्यक्तिहरु थिए र उनीहरु कुमारी सिनेमा घरमा फिल्म हेर्न गएका थिए नि भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो बचाउ गर्ने कोशिश गरे ।परिवारकै सदस्य भएकाले चढ्नै नमिल्ने हो र ? भन्दै उनले प्रतिप्रश्नसमेत गरे । त्यसपछि ‘गाडी तपाईँलाई दिएको हो कि तपाइँको परिवारको लागि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो ठूलो होइन ।’ दिउँसो बाटो पर्दा परिवारका सदस्य बोक्दा ठूलो विषय बनाइन नहुने उनको तर्क थियो ‘।
सरकारी गाडीको दुरुपयोगसम्बन्धी समाचार निरन्तर फलोअप गरेपछि सरकारले यस्तो सवारीको दुरुपयोग रोक्न सर्कुलर नै जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई सवारीको प्रयोग गर्न नदिन र कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोगमा ल्याउन भनेको थियो ‘।
सरकारी सवारीसाधनमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने सम्बनधमा पनि रातोपाटीमार्फत समाचार प्रकाशित भएपछि अनुसन्धान गर्ने निकाय र न्यायाधीश बाहेक अन्य सबै सरकारी गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न थालिएको थियो ।’